AATON DIGITAL'S CANTARX3 သည် LOCATION အသံဖမ်း IBC 2015 ကို AT IABM DESIGN နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုကိုရရှိခဲ့သည် - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » AATON DIGITAL'S CANTARX3 သည် LOCATION အသံဖမ်း IBC 2015 ကို AT IABM DESIGN နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုကိုရရှိခဲ့သည်
AATON DIGITAL'S CANTARX3 သည် LOCATION အသံဖမ်း IBC 2015 ကို AT IABM DESIGN နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုကိုရရှိခဲ့သည်
2 ပြပွဲ 300 ထောက်ပံ့ x ကို 1 dpi ဓာတ်ပုံများ) ကိုသစ်ကို CANTAREM3assign ရောနှော fader panel ကိုနှင့်2အတူ CantarX2 အသံဖမ်း) IBC မှာဆုချီးမြှင့်တင်ဆက်မှု - လွှတ်ပေးရန်၏အဆုံးမှာအပြည့်အဝစာတန်းများကို
AATON DIGITAL'S CANTARX3 သည် LOCATION အသံဖမ်းအနိုင်ပေး IABM IBC 2015 ကို AT DESIGN နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု Awards
ပဲရစ် & လန်ဒန်, 28th စက်တင်ဘာလ 2015:
Aaton ဒစ်ဂျစ်တယ်အဆိုပါဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည် IABM ယင်း၏သစ်ကို CantarX2015 ဒစ်ဂျစ်တယ်3လမ်းကြောင်းတည်နေရာ audio ကအသံဖမ်းများအတွက် IBC 24 မှာအသံကဏ္ဍဒီဇိုင်းနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုကို။
ယင်းအသံလွှင့်မီဒီယာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းမှသိသိသာသာဖြေရှင်းချက်သို့မဟုတ်အသစ်အခွင့်အလမ်းများကိုပူဇော်ကြောင်းထုတ်ကုန်အသိအမှတ်ပြုဒီနှစ်မှာတော့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများ, မြ Lounge, RAI အမ်စတာဒမ်မှာ IBC2015 စဉ်အတွင်းကျင်းပမယ့်အထူးအခမ်းအနားမှာပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြသည်။ ဆုရရှိသူအဆုံးအသုံးပြုသူအကျိုးအတွက်, created ပိုက်ဆံ, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအကောင်အထည်ဖော်ရေး, စွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်အသစ်အခွင့်အလမ်းများကိုများအတွက်တန်ဖိုးအသုံးအနှုန်းများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်း၎င်းတို့၏ရိပ်မိသက်ရောက်မှုအပေါ်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
Aaton ဒစ်ဂျစ်တယ်၏ CEO Jacques Delacoux မှတ်ချက်များ: "ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်သူ၏ဤလေးစားဖွယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့မှဤဆုလက်ခံရယူဖို့ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့်ယခုနှစ်ထပ်ကွမ်းဝမ်းသာပြသတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ 2014 အတွက် Cinec Award ဆုလက်ခံရယူဝမ်းသာကြတယ်။ "
ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဟာအသံဖမ်းရဲ့နေရာအများအပြားမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ linear နှင့် rotary faders နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူ fader နှင့်ညှိသည်အီလက်ထရောနစ်အာရုံခံကိရိယာများအကြားမျှတိုက်ရိုက်စက်မှုကွန်နက်ရှင်လည်းမရှိ။ အမြဲတမ်းရေနှင့်မြေမှုန့်ထဲကအကိုစောင့်ရှောက်ရန်, တစ်ဦးသံလိုက်စက်ကွင်းကနေတစ်ဆင့်အတွင်းကိုတံဆိပ်ခတ်အီလက်ထရွန်းနစ်မှပြင်ပချိတ်ဆက်အလွန်အားကောင်းတဲ့အသေးသံလိုက်ရှိပါတယ်။ roller ဘောလုံးနှင့်ဝက်ဝံကိုလည်းအတွင်းအသုံးပြုသောနှင့်အဆုံးရလဒ်ထိန်းချုပ်မှုမှဒါပေမယ့်ဖုန်မှုန့်သို့မဟုတ်ရေ ingress များ၏စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ '' ခံစား '' ဖြစ်ပါတယ်နေကြသည်။
အဆိုပါ CantarX3 ထုတ်လုပ်မှုမော်ဒယ်များယခုအမိန့် Pre သူအများအပြားပေးပို့လျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ Aaton နှင့် Cantar အမည်များပြီးသားရှေ့ဆက်ထူးချွန်အရည်အသွေး, လက်တွေ့များနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်တစ်ဦးဂုဏ်သတင်းကိုသယ်ဆောင်လျက်, အသစ်သော CantarX3 Aaton ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွက်နှစ်ပေါင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံမှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်သောသူတို့အဘို့တစ်ခုထူးချွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် tool ကိုဖန်တီးရန်သစ်ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့်အသစ်သောကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်လျှောက်ထားလိုက်ပါတယ် လာရန်။
Jacques ကျယ်ပြန့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံစက်မှုလုပ်ငန်းများကအသုံးပြုနှင့်၎င်းတို့၏တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်အလွန်အမင်းလေးစားမြင့်မားတဲ့အဆုံးကိုကိုးကားမော်နီတာ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းလူသိများလည်း Transvideo ၏ CEO တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Aaton ဒစ်ဂျစ်တယ်ရဲ့အသစ် CantarX3 တည်နေရာ 24 လမ်းကြောင်းဒီဂျစ်တယ်အသံအသံဖမ်းရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အသွင်အပြင်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်တကွ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သံကို recordist နှင့်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံ, တည်နေရာနှင့် orchestral မှတ်တမ်းတင်များအတွက်အဆုံးစွန်စက်ဖြစ်ပါတယ်။
Motion Picture, အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်များအတွက်ပြင်သစ် Technologies က။
အဆိုပါ IABM (အသံလွှင့်ထုတ်လုပ်သူများအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Associaton) ကထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းမှထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသွင်းကိုယ်စားပြု non-အမြတ်ကုန်သွယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအစည်းအရုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ထုတ်မြှင့်တင်က၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်ရသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာယင်းထုတ်လွှင့်ကဏ္ဍ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတန်ဖိုးကိုထက်ပို 80% ကိုယ်စားပြုမလုပ်ပဲ IABM ယင်း၏အဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားစည်းရုံးဩဇာညောင်းသောစကားသံသည်။
Aaton ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် Transvideo အကြောင်း:
1985 မှစ. နောက်ပိုင်းတွင် Transvideo ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်ရေးအတွက်ထုတ်ကုန်ကိုခံခဲ့ရသည်။ ဒါဟာ 1990 အတွက်ပထမဦးဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြားချပ်ချပ် panel ကိုမော်နီတာဒီဇိုင်း, ပြီးတော့ကတည်းကထိုသို့သောကှတျချ / i နှင့် ARRI LDS အဖြစ်အသိဉာဏ်မှန်ဘီလူးထဲက metadata ထုတ်ယူခြင်းအပါအဝင် High-end On-board ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစျေးကွက်ဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။
Transvideo ကိုလည်းတစ်ခုတည်းတန်းမှာ A380X မိသားစုထဲမှာလည်းထိုကဲ့သို့သောစူပါလေကြောင်းလေယာဉ်တင်သင်္ဘော A350 နှင့် A32 အဖြစ်အဲယားဘတ်စ်လေယာဉ်ပျံတွင်အသုံးပြုအများအပြားထုတ်ကုန်နှင့်အတူကိရိယာများအားအတွက်တက်ကြွစွာဖြစ်ပါတယ်။
An အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့် 2009 အတွက် 2010 နှင့် Cinec Award ဆုအတွက်၎င်း၏တီထွင်မှုနှင့်သာလွန်အင်ဂျင်နီယာစွမ်းရည်များအတွက် Transvideo အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
ဇွန်လ 2013 ခုနှစ်, TRANSVIDEO ရဲ့ကိုင်ပြီး Ithaki AATON, ရုပ်ရှင်ကိရိယာများ၏ပြင်သစ်ထုတ်လုပ်သူရရှိခဲ့သည်။ ဤအချိန်ကတည်းက AATON-ဒစ်ဂျစ်တယ်3အတွက် Cinec Award ဆုလက်ခံရရှိကြောင်းတည်နေရာသံကိုအသံဖမ်းအပေါ်အများဆုံးအဆင့်မြင့်သည် Cantar-X2014 တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ချိတ်တွဲမှုများအဖြစ်ထောက်ပံ့2x ကို 300 dpi ဓါတ်ပုံ:
ဓာတ်ပုံ 1) အသစ်က CANTAREM3assign ရောနှော fader panel ကိုအတူ CantarX2 အသံဖမ်း
ဓာတ်ပုံ 2) T-သူက IBC ဆုတင်ဆက်မှု: left မှစ. , ပတေရုဖြူ, IABM စီအီးအို; Karin Fouque အရောင်းဒါရိုက်တာ Aaton ဒစ်ဂျစ်တယ်, Pierre ၏ Michoud နှင့် Pascal Grillere, Aaton ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအင်ဂျင်နီယာများ
24 လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် Aaton Aaton-ဒစ်ဂျစ်တယ် ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Cantar Cantarem2CantarX3 Cinec ဆုချီးမြှင့် ရုပ်ရှင်ပညာ ဒီဂျစ်တယ်အသံအသံဖမ်း IABM IABM ဆုချီးမြှင့် သစ်လွင်မှု Jacques Delacoux Karin Fouque တည်နေရာ audio ကအသံဖမ်း ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံလွှာ Transvideo တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2015-09-28
ယခင်: ဖရန့် Zappa, စီးတီးနှလုံးအတွက် Featured Duke Ellington Portraits: 2015 လတ်ဆတ်အာရုံစိုက်
နောက်တစ်ခု: နယူးနဲ့ပြန်ရောက်ကျဆုံးခြင်းစီးရီးတွေနဲ့အလုပ်များ Technicolor PostWorks